Dagaal Ka Dhacay Deegaan Ka Tirsan Gobalka Hiiraan. – Bogga Calamada.com
Dagaal Ka Dhacay Deegaan Ka Tirsan Gobalka Hiiraan.
Dagaal culus oo muddo socday waxa uu deegaanka Af-cad oo hoostaga degmada Jalalaqsi ee Wilaayada Hiiraan ku dhexmaray ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin iyo maleeshiyaatka Murtadiinta.
Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin ayaa weerar culus ku qaaday maleeshiyaat ka tirsan kuwa maamul gaaleedka Hirshabelle kuwaasi oo doonayay iney dhac u geystaan dadka deegaanka Afcad,waxaana gudaha deegaanka ka dhacay dagaal muddo socday.
Maleeshiyaatkii Murtadiinta ayaa dagaalka markii muddo socday gabi ahaan deegaanka isaga cararay,iyadoona ciidamada Shabaabul Mujaahidiin ay si buuxda ula wareegeen gacan ku heynta deegaankaasi.
Inta la xaqiijiyay maleeshiyaatka daba dhilifka Hirshabelle waxaa dagaalkaasi looga dhaawacay Shan askari oo Saddex ka mid ah dhaawacyadooda culusyihiin kuwaasi oo maleeshiyaatka Murtadiinta ay la galeen degmada Buulo burte.
Dadka deegaanka ayaa si weyn usoo dhaweeyay sida ay ciidamada Mujaahidiinta u difaaceen sharafka iyo Hantida dadka deegaanka maadaama maleeshiyaatka Murtadiinta ee laga ceyriyay halkaasi ay doonayeen iney dhacaan hantida dadka deegaankaasi.
Dagaalkan ayaa imaanaya xilli saacadihii lasoo dhaafay Kolanyo ka tirsan ciidamada dowlada Ridada Jabuuti qarax culus lagula beegsaday gudaha magaalada Beledweyne kaasi oo Jabuutiyaanka looga waxyeeleeyay gaari Gaashaaman tiro askar ahna ay dhimasho iyo dhaawac kaga noqdeen.